April 18, 2021 Xuseen 15
Ciidanka Danab inkasta oo ay Soomaali yihiin, haddana, waa ciidan Maraykan sameystay kans amarqaata, Farmaajona ma amri karo mana adeegsan karo.
Farmaajo waa ninka taliyaha ciidanka lugta ka dhigay Tahaliil Biixi oo la ogyahay caqlixumadiisa iyo fadhi-ku-dirirnimadiisa. Wuxuu la caqli yahay Barre-hiiraale waana dadka inay Kismaayo qabsadaan ku noqotay cudurka karoonikada ah.
Hadda caqligii caynkaas ahaa ayuu Xamar la taagan yahay isagoo ku boolaxooflaynaya inuu Xamar burburin doono. Shalay markii Jaalle Siyaad haystay nooc kasta oo hub ah, Biixi wuxuu ka mid ahaa kuwii ka cararay ee garabkiisa ka baxay. Maanta ma waxay la tahay inuu beebeeyada Turkiga Xamar ku burburin karo mise wax kale ayuu haystaa?
Hawiye waa dulliyeen isaga iyo Farmaajoba iyadoon dagaalba la gaarin. Iyagoo hubeysan ayey Xamar hadba dhex mushaaxayaan, Farmaajo iyo Biixina waxba kama qaban karaan.
Nasiibdarro, guulwadeyaasha aan caqliga iyo tayada lahayn ee Farmaajo ku xeeran waxay iska dhaadhiciyeen inaan Hawiye doonayn dagaal iyo in Xamar burburto, sidaa awgeed, ay keligitaliyenimo iyo guulwadenimo aqbalayaan. Sigaaro ima barato!
Alloow, yaa geela ciinka ka celiya. Farmaajo dagaal Xamar ka dhaca waxay uga dhigan tahay is-halligid (suicide), si degdeg ah ayuuna ugu jabayaa, kooxda ay isku jilibka yihiin cid ahayn oo u dagaallamaysaana majirto. Marka laga adkaadana meel ay u cararaan majirto oo Al-Shabaab baa jidka u taagan oo gawracaya. Alloow, yaa u sheega inaysan is-halligin. Soo noqonmayo waagii Jaalle Siyaad iyo amar-ku-taaglayntii, sadbursigii, tayodarradii, jaahil-biliddii, iyo boobkii hantida qaranka.
Rarar. Subxaanallah waryaa waxaad qoraysaan ka fiirsada waa bil Ramadane.
Ninyohow markaad hadaf leedahay baa wax lasheegaa lakiin in laiska hadaaqo macna matarto wax lafahmi karo soo qor ama iska aamus
WADDANKU DOWLAD AYUU LEEYAHAY Ramadan mubaarak
Ninkan qoraaga ahi waa nimaan Soomaaliyaba wax kala socon. In mareykanku ballidoogle ku soo noqdo waxay farmaajo ugu dhigantahay isagoo la deldelay, iskaba daa dhiirrigelin uu ka helo arrintaas. Fadlan qoraa wax kale noo sheeg oo aan kaa qaadanno. Nin baa maalin hore yiri Farmaajo waxaan ku ogaa demiinimo, doqonimana waa ku darsaday. Maalintaas waan la yaabay ninkaas, laakiin hadda waxaa muuqata inuu taas yahay markaad eegto sida uu siyaasad ahaan iyo taageera ahaanba cidla isu soo dhigay. Anigoo aan ahayn mucaarad iyo muxaafid, waxaa ii muuqata inaan taageerayaashiisu ku farxi doonin mawjadaha siyaasadeed ee ku soo fool leh. Cidina ma filayn in Farmaajo codsan doono inuu mucaaradkii uu weeraray oo uu weligiis diidanaa inuu hor fariisto uu maanta miciin bidi doono. Maxaa ka xun in nadaxweyne ciidan amarsiiyo oo ay diidaan sida habeen hore dhacday. Hadduu Farmaajo rabo inuu sirta muqdisho ogaado ama Soomaaliya, ha bedelo weriye Fahadkan farta malabka u daraya ee aan waxba nabadsugid kala socon. Dadkii muqdishana kala dhinte, qolada xalanena waxay rabaan inay sharafta ka qaadaan, caku xukun jeceyl illaa indho ma leh. Haddaad rabto inaad caalamka iska celiso dadkaaga u tanaasul, si kasta oo ay kaaga gardaran yihiin.
SOOMAALIYA waa wadan leh xuduudo cayiman, sida wadamada caalamka!!!!
#Gudidada Xuduudada Ilaalada Soomaaliyeed. #GXIS Somaliland #GXIS Puntland #GXIS Koonfur galbeed #GXIS Galmug #GXIS Hirshabeele #GXIS Jubaland
Waxaa tahay Dubbaha labaad ee Soomaalia oo beenta iyo warxuma tashiilka buufiya. Adiga oo aan Soomaaligiiba qori Karin ayaad rabtaa in aad siyaasadda ka faalootid. Wali ma’aadan rumaysan in uu Farmajo galbaday. Wali laf cad ayaad toobin ku haysaa ee dadkaaga dhinac ka raac yaadan lumine dhinac ka raac.
A.Arar kkkk Nin maseyray uma horeysid bil RAMADAN ankee kama xishoonaysid,ankee qof aadan waligaa arag in aad qabiil ku nacdo caqliga saliimka ah ma qabo.
Biixi ankee Xamar ma joogo.
War foolxumo caqli la aan haku darsan.Qabiil bay kaaga dhegtay.
Kismaayo kkk haddii aanan marti laguugu ahayn oo aan kaaga badnahay oo waxqaybintii Gabre ay bedel tahay sow dhiig kar ms ahan?
Puntland in aad ku ekaato is bar hadda Xamar waad la dhamastay,Bakool sidoo kale 2kun qof ayaa Kismaayo joogta iyagana waa ehel laskiin 10 MP wasiir A ah guddoomiye ku xigeen parlamaanka Jubaland guddoomiye Kismaayo wadkood baa galay 4 sanno oo diif ka la cunaayo 4 kaloo soo socota yaa isgaaray.
Waxaa igu maqaal ah in dadka qaar ay bilaabeen in ZINJIBAAR loo socdo maxaa ka jira.
War qabyaaladda yaanay diin idiin noqon.
Dadka Farmaajo taageeraa waa damiinno aan waxba fahmin.
WADDANKU DOWLAD AYUU LEEYAHAY. Ramadan mubaarak
WADDANKU DOWLAD AYUU LEEYAHAY Ramadan mubaarak.
Nin durbaan qaatay, ilaaq dalbay. Biixi isagoo hawlgab ah isagaa qoorta la galay askar hawlaheed. Raggii isaga la da’ahaa amase ka da’yaraa waxaa lagu diiday hawlgab in ay yihiin, isagana qaraabokiil baa taliye looga dhigay.
Arrinta aqoonta Biixi, anigu qof aanan aqoon been kama sheegeen. Biixi afkiisa ayaan anigoo arakaya oo ag-fadhiya ka maqlay mowqifkiisa ku saabsan Kismaayo. Faahfaahin intaas ka badan bixinmayo.
Hadda kahor waxaad sheegtay in Mareexaan iyo Ogaadeen ku heshiiyeen in Kismaayo doorasho ka dhacdo. Maxaa doorashada aan Somalia inteeda kale ka jirin Kismaayo ku koobay? Haddii aad Kismaayo ku badan tahay oo soo degtay 30kii sano ee ugu dambeeyey, dhib uma arko. Shacab waa loo baahan yahay iyo in magaaladu cammiranto laakiin inta siyaasaddu ka saldhiganayso adiguna aad ku socoto maskaxda mooryaannimada, Kismaayo kama talin doontid. Inta aadan Kismaayo ku fakerin, Gedo iyo Caabudwaaq islaaxi oo asaaggood ha la tartameen.
Bisha Ramadan, anigu waxaan ka hadlay siyaasad iyo shakhsiyadda rag mas’uuliyad haya, adiguse dad baad nasabkooda iyo isirkooda duraysaa. Maroodigu takarta saaran ma arko.
Damcan Qofku marka uu ka hadlaayo waxaa muhiim ah inuu laba arrimood midkood inuu ku cabbiro midda koowaad inuu ku hadlo wax Macquul ah ” Logical Arguments” Haddii kale inuu ku hadlo luuqad ah ” Legal Arguments “, Damcan dadku sharci ma wada baran,waayo Qofka Sharciga bartay baa sameyn kara” Legal Arguments “,waxa ay dadka intooda badan sameyn karaan waa Dood Macquul ah,xattaa haddii aysan jirin,dadku is oran karaan armay run tahay.
Wixii ka soo hara labadaas aan kor ku xusan waa iska hadal waana sida ay u badan Soomaalida maantay wada Siyaasiinta ah,wada Aqoon yahanka ah.
Doorasho iney dhacdo haddii ay ahaan laheyd mid toos ah Ama Dad badan waxaa diidey laba Nin waa Deni iyo Axmed Kenyatta,iyaguna ma ahan Niman fekerkooda isticmaalaa,waana waxa Jid iyo Jaho diid ka dhigey.
Okay haddii Doorasho la diidey oo ay dooddeedii qaadatay in ka badan 8 Bilood,miyaa lagu jiri karaa iska daba wareeg, haddii lagu sii jiro meeqa ayaa la sugi karaa ? Dad iyo dad dhibaateysan baa noo jooga,u baahan In shaqo badan la qabto.
Sidaas awgeed waxaan Aaminsanahay shakina ku jirin maskax fayoow leh,leh Damiir Soomaalinimo, dareemaya xaaladda Dadka iyo Dalka Soomaaliya muddo dheer, intaas ka danqanaya Dhibaatada Dadkiisa iyo Dadkiisa wuxuu Aqbalayaà Xeerkii Farsamada Doorashada Soomaaliya Baarlamaanka Soomaaliya sharciga ka soo saaray, Madaxweyneyaasha Soomaaliyana Saxiixay, waa soo dhaweynayaa,islamarkaana waa wax Dastuuri ah in Muwaadaniinta Soomaaliyeed Codkooda dhiibtaan waayo Muwaadin kasta oo Soomaali ah wuxuu Xaquuq Dastuuri ah u leeyihiin iney wax doortaan,Ama la doorto.
Inta maantay Media taagan,mucaarad sheeganaysa haddii ay joogaan Xamar, Ama Garoowe iyo Kismaayo >>> waa shaqsiyaad la wada og yahay islamarkaana Siyaasadda Soomaaliya horey ugu fashilmay, weliba haddii la dhaqan geliyo Sarreynta sharciga kuwo badan baa yeelanaya Mudnaan in sharciga la horkeeno waayo cidna kama sarreyso sharciga.
Sidaas awgeed marka la sameeyo isbarbar dhig Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxda Jid iyo Jaho diid,waxaa muuqaneysa in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka mudan yahay Hoggaaminta dadka iyo Dalka waayo Soomaalidu waxaay tiraahdaa (Xaglo Geel wax gutin la geliyo ka weyn, sidoo kalena Soomaalidu waxaay tiraahdaa Qorax soo baxday Sacabbo cidna kuma Qarin karto, sidoo kale Dadka Banaaderiga ah ” waxaay yiraahdaan Sacii Caano leh Socodkiisa laga kasaa), micnaha wax qabadka Dowladda Soomaaliya iyo Hoggaankeedu waxaa uu kaga duwan yahay Dowladihii ka horreeyey iyo Madaxdoodii Burburkii ka dib Dowladdii Soomaaliya 26/01/1991, waa wax aan la inkiri karin, kama hadlaayo dad wax ku taageera Caadifadda Cudurka Coronavirus Tribalism ay Soomaaliya dhaxalka u heshey.
Ciidanaka Danab wa aciidan ka nadiif ah siyaasada waa ciidmao aay tababareen dawalda mareykan hadey siyaasad dhex galaan waxaa la maxkamdeyn taliyaasha markeynka ah kolkaa Farmajo uma joogaan amrna kama qaataan ah ku duul waa dhalinyaro ka nadif ah waxaa ma aha ida turkoga oon ka naxeyn Somali ciidnaankaan u taba baraa koba madaxweynah mesha jooog taas oo ah qalad uu Turkiga ka galey ummada somaliyeed